कांग्रेसले आज ७७ जिल्लामै विरोध प्रदर्शन गर्दै - नेपालबहस
कांग्रेसले आज ७७ जिल्लामै विरोध प्रदर्शन गर्दै
| १०:३८:२४ मा प्रकाशित
३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आज ७७ जिल्लामै विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । कांग्रेसको यो तेस्रो चरणको अन्तिम कार्यक्रम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुषमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वमा आयोजना हुने विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले घरघरबाट सहभागिता जनाएर प्रभावकारी रुपले सफल बनाउन आइतबार नै अपिल गरिसकेका छन् ।
विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको संस्थागत निर्णय गरेको कांग्रेसले यसअघि पुस १३ र २५, माघ ३, ८, १९ र २४ गते विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
नेकपाको कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा बनेको छैन : कोइराला २७ मिनेट पहिले
नेकपा विभाजनः अध्यादेश ल्याउनेकि संसदमै सामाना गर्ने ? १४ मिनेट पहिले
आइपिओ नतिजा हेर्न सिडिएससीले ल्यायो नयाँ वेबसाइट १७ मिनेट पहिले
कुटपिट गरी गर्भपतन गराएको आरोपमा तीन जना पक्राउ ५४ मिनेट पहिले
अपहरणमा परेका बालकको होटलबाट उद्धार, बुवा र मामा पक्राउ ६ दिन पहिले
अर्काे साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन: बामदेव र नारायणकाजी भित्रने, को को छन् हटाइनेको सुचीमा ? ६ महिना पहिले
व्यक्तिगत कर्जामा पनि ब्याजदर परिर्वतन नर्गन निर्देशन ५ महिना पहिले
देशैभर ७ सय कैदीलाई कोरोना संक्रमण, आठको मृत्यु ५ महिना पहिले